कसरी र कसरी कपाल कपाल हटाउने उपकरण प्रयोग गर्ने? - टेक्निकल जानकारी - शेन्जेन नोबल स्मार्ट निर्माण प्रौद्योगिकी कम्पनी लिमिटेड
कसरी र कति पटक कपाल रिमोअल उपकरण प्रयोग गर्ने?
समय: 2021-04-02 हिट्स: 3
केटीहरूले सुन्दरता मन पराउँछन्, र उनीहरूको छाला उज्यालो र चिल्लो होस् भन्ने चाहन्छन्, ताकि तिनीहरूले खुला कपडा र खुट्टा सहित सबै प्रकारका कपडा लगाउन सकून्। चिल्लो र सुन्दर छालाको कुरा गर्दा, लेजर कपाल हटाउने उपकरण पनि लोकप्रिय सौन्दर्य उपकरण मध्ये एक हो। सुरक्षाको लागि, कसरी घर कपाल हटाउने उपकरण प्रयोग गर्ने र कति पटक? आउनुहोस् आज एक नजर हेरौं ~
कपाल हटाउने उपकरण छालामा कति पटक उज्यालो हुन्छ?
यो सामान्य रूपमा प्रत्येक कपाल हटाउने क्षेत्रमा एक फ्ल्याश लिन घर कपाल हटाउने उपकरण प्रयोग गर्नु हो, तर कपाल हटाउने प्रभाव सुनिश्चित गर्न हामी २- times पटक सिफारिस गर्दछौं। कपाल हटाउने उपकरणले कपालको फोलिकल्समा मेलानिनमा काम गर्दछ, र कपालको कपालमा कपालको बृद्धि चक्र "शिफ्ट वर्क" मा पर्छ। कपालको यो झुण्ड "काम बन्द", र नयाँ ब्याच "काम गर्न उठ्नेछ", त्यसैले यदि छाला छोटो अवधिमा धेरै चोटि उज्यालो भए पनि, कपाल हटाउने प्रभाव स्पष्ट हुँदैन। त्यसकारण, कपाल हटाउने उपकरण प्रत्येक पटक एक पटक प्रयोग गर्नु आवश्यक छ, बारम्बार प्रयोग गर्दा कपालको फोलिकल्सले आफ्नो जीवन शक्ति हराउन सक्छ, र कपाल पनि कम हुनेछ। कपाल हटाउने उपकरणको सहि उपयोग र सावधानीका बारे, हामीले यस अघि पनि उल्लेख गरिसकेका छौं।
कपाल हटाउने उपकरण कति पटक प्रयोग गर्ने?
पहिलो चरण: उपकरण प्रत्येक दुई हप्तामा एक पटक प्रयोग गर्नुहोस्। Depilator प्रकाश पछि तुरुन्त कपाल बहाउँदैन, तर धेरै जसो कपाल इरेडिएसन पछि4पटक झर्नेछ।
दोस्रो चरण: यसलाई एक महिनामा प्रयोग गर्नुहोस्। यस चरणमा, कपाल बिस्तारै बढ्नेछ। तपाईं महिनामा एक पटक उपकरण प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ।
तेस्रो चरण: यसलाई प्रत्येक तीन महिनामा एक पटक प्रयोग गर्नुहोस्, थोरै मात्रामा नयाँ कपाल बढ्न जारी रहनेछ। यस समयमा तपाई यसलाई २- 2-3 महिनामा नियमित प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ।
चौथो चरण: यस चरणमा, कपाल हटाउने काम पनि अन्तमा आएको छ। शरीरमा कपाल गाह्रो हुँदै जान्छ, र छाला चिल्लो हुन्छ। त्यहाँ कहिले काहिं नयाँ कपालहरू मात्र हुन्छन्, आवश्यक भएमा केही केशहरू मात्र प्रयोग गर्नुहोस्।
कपाल हटाउने उपकरणको प्रयोग गर्दा सबैले कसरी र कति पटक कपाल हटाउने उपकरण प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा बुझ्नुपर्दछ। केवल सही र सुरक्षित कपाल हटाउने विधि द्वारा मात्र आश्वासन दिन सकिन्छ।
अघिल्लो: सही तरीकाले कपाल हटाउने उपकरण किन्नको लागि
अर्को: लेजर कपाल हटाउन कहिले सम्म रहन सक्छ?